Ukunyanzelwa komfanekiso kunyanzelekile ukuba ukhangele, ukuSelfowuni, kunye nokuSebenza kokuGuqulwa | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 21, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 21, 2021 Douglas Karr
Xa abayili bemizobo kunye nabafoti bakhupha imifanekiso yabo yokugqibela, ngokwesiqhelo abalungiselelwanga ukunciphisa ubungakanani befayile. Ukucinezelwa komfanekiso kunokunciphisa kakhulu ubungakanani befayile yomfanekiso- nokuba yi-90 %- ngaphandle kokunciphisa umgangatho kwiliso lenyama. Ukunciphisa ubungakanani befayile yomfanekiso kunokuba nezibonelelo ezimbalwa:
Amaxesha okulayisha ngokukhawuleza -Ukulayisha iphepha ngokukhawuleza kwaziwa ukuba kubonelela ngamava aphezulu kubasebenzisi bakho apho bengazukukhathazeka kwaye baya kuzibandakanya ixesha elide kwindawo yakho.
Ukuphuculwa kweZikhundla zoPhando lweOrganic -UGoogle uthanda iisayithi ezikhawulezayo, ke ixesha elininzi onokuthi ucofe ixesha lokulayisha indawo yakho, kungcono!
Ukunyuka kwamaxabiso okuGuqulwa -Iisayithi ezikhawulezayo ukuguqula ngcono!
Ukubekwa kwebhokisi engenayo engcono -Ukuba wondla imifanekiso emikhulu kwindawo yakho kwi-imeyile yakho, inokukutyhalela kwifolda ye-junk endaweni yebhokisi engenayo.
Nokuba ngubani kumthengi, ndihlala ndicinezela kwaye ndenze imifanekiso yabo ibe mikhulu kwaye ndibone ukuphuculwa kwesantya sephepha labo, inqanaba, ixesha lesiza kunye namaxabiso okuguqula. Ngokwenene yenye yeendlela ezilula zokuqhuba nokwenza kwaye inembuyekezo enkulu kutyalo-mali.
Uyisebenzisa njani iMifanekiso
Kukho iindlela ezininzi zokunyusa ngokupheleleyo imifanekiso kumxholo wakho.
khetha imifanekiso emihle - baninzi kakhulu abantu abajongele phantsi ifoto yemifanekiso emikhulu yokufumana umyalezo ... nokuba yi-infographic (enje ngeli nqaku), umzobo, ubalisa ibali, njl.
Cindezela imifanekiso yakho-bayilayisha ngokukhawuleza ngelixa begcina umgangatho wayo (sicebisa Kraken kwaye ine-plugin enkulu yeWordPress)
Lungiselela umfanekiso wakho amagama efayile -Sebenzisa amagama aphambili achazayo afanelekileyo kumfanekiso kwaye usebenzise iideshi (hayi ukugxininisa) phakathi kwamagama.
Lungiselela umfanekiso wakho izihloko -Izihloko zigqunywe kwizikhangeli zangoku kunye nendlela entle yokufaka umnxeba wokwenza isenzo.
Lungiselela umfanekiso wakho wokubhaliweyoi-alt text- i-alt itekisi yenzelwe ukufikelela, kodwa enye indlela elungileyo yokufaka amagama aphambili kumfanekiso.
ikhonkco imifanekiso yakho-ndiyamangaliswa linani labantu abasebenza nzima ukufaka imifanekiso kodwa bashiye ikhonkco elinokusetyenziselwa ukuqhuba abantu abongezelelweyo kwiphepha lokufika okanye enye into yokubizela isenzo.
Yongeza umbhalo kwimifanekiso yakho - abantu bahlala betsalelekile kumfanekiso, benika ithuba yongeza isicatshulwa esifanelekileyo okanye ukubizela inyathelo ukuqhuba uthethathethwano olungcono.
Faka imifanekiso kwifayile yakho ye- Sitemaps -Siyacebisa Isikhundla se-Math SEO ukuba ukuWordPress.
Sebenzisa noluphendulayo imifanekiso-imifanekiso esekwe kwivenkile kunye nokusebenzisa srcset ukubonisa ubukhulu, ubungakanani bemifanekiso, iya kulayisha imifanekiso ngokukhawuleza ngokusekwe kwisixhobo ngasinye ngokusekwe kwisisombululo sescreen.
Layisha imifanekiso yakho kwi yomxholo wenethiwekhi (CDN) -Iziza zibekwe ngokwejografi kwaye ziya kukhawulezisa ukuhanjiswa kwemifanekiso yakho kwizikhangeli zabakhenkethi bakho.
Isikhokelo soKwenziwa koMfanekiso weWebhusayithi
Olu lwazi lubanzi lweWebhusayithiBuilderExpert, Isikhokelo soKwenziwa koMfanekiso weWebhusayithi, uhamba kuzo zonke izibonelelo zoxinzelelo lomfanekiso kunye nokwenza ngcono- kutheni kubalulekile, iimpawu zefomathi yomfanekiso, kunye nenyathelo ngenyathelo ekusebenziseni umfanekiso.
Iqonga lokucinezelwa komfanekiso weKraken
Ukuba ufuna i-bump ekhawulezayo kumaxesha okulayisha indawo yakho, sukujonga ngaphezulu Kraken, Enye yeenkonzo ezilungileyo kumnatha! Sizamile iinkonzo zasimahla kwixa elidlulileyo- kodwa iigrafiki zethu ezinkulu bezisoloko zikhulu kakhulu ubungakanani befayile kwinkonzo yabo- loluphi uhlobo lokoyisa injongo!
Kraken ine-interface epheleleyo yewebhu, i-API eyomeleleyo, kwaye -ngombulelo-Iplagi yeWordPress! Iplagi ikuvumela ukuba uzenzele ngokuzenzekelayo xa ulayisha kunye nokwenza ubuninzi kweminye imifanekiso owawuyilayishe ngaphambili. Iziphumo ziyamangalisa:
Kwaye, ukuba uyiarhente, inkonzo kaKraken inikezela ngamaqhosha e-API amaninzi ukuze ukwazi ukudibanisa inani labathengi kwinkonzo
Inqaku nje, sisebenzisa eyethu Ikhonkco lobulungu beKraken kule posi! Ndiyathemba ukuba uyajoyina kwaye uvune izibonelelo.
tags: Iithegi ze-alti-alt textCdnIsantya sendawo kaGoogleuxinzelelo lomfanekisoigama lefayile yomfanekisoukulungiswa komfanekisoIsikhokelo sokusebenza komfanekisoukulungiswa komfanekiso we-infographicubungakanani bomfanekisoimephu yesayithiizihloko zemifanekisoCingakrakenLungiselela imifanekisoisantya sephephaimifanekiso ephendulayoSEOUkusebenza komfanekisoimfutshaneisantya sendawosrcsetencinci pngisikhokelo sokwenza iwebhusayithiwebwebsakhiwo sokwakhaUkucinezelwa komfanekiso wegamaubungakanani bomfanekiso wegamaI-plugin ye-wordpress krakenwp ukutshiza